Somaliland: Siciid Cilmi Rooble Oo Shaaciyey Inuu Ku Biirayo Garabka Axmed M. Seed, Xubnaha Xirsi Hoggaaminayona Ku sifeeyey Abrisyo Burburka WADDANI Miciyaha U Lisinaya - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Siciid Cilmi Rooble Oo Shaaciyey Inuu Ku Biirayo Garabka Axmed M....
“Imika xisbiga baqdinta leh ee abrisku soo galay waa WADDANI, KULMIYE baqdin maleh oo isagu wuu soo dhamaysay,waanan teegeersanahay garabkaas, waayo waa dadkii aanu wada shaqaynaynay, aniga labftaydu waan ku biirayaa garabkaas”
“Raggii aan uga tegay xisbiga KULMIYE ee dhibanaha iga dhigay, ayaa nagu soo biiray, waxana aan qabaa in cidhib la’aani WADDANI kusoo socoto, ragganina waxa ay doonayeen inay KULMIYE ka takhalusaan oo xisbiyo cusub samaystaan.”Xildh. Siciid Cilmi Rooble
Guddoomiyaha guddi-hoosaadka distoorka iyo xuquuqda aadamiga ee golaha wakiillada, isla-markaana xubin sare ka ah xisbiga WADDANI, ayaa markii ugu horraysay si furan uga hadlay dhibaatooyinkii ka dhacay shirkii golaha dhexe ee xisbiga WADDANI, isaga oo walaac ka muujiyey xubnihii kasoo baxay xisbiga KULMIYE ee dhawaan WADDANI la midoobay.
Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo u warramay weriye Cabdishakuur Dayib oo katirsan HCtv, ayaa shaaciyey inuu si rasmi ah ugu biirayo garabka uu hoggaamiyo guddoomiye Axmed Muumin Seed, waxana uu hoosta ka xarriiqay inuu xisbiga WADDANI haatan noqday mid burbur looga baqayo.
Siciid Cilmi waxa uu farta ku fiiqay inay xisbiga WADDANI ku biireen xubnihii majo-habaabiyey barnaamij siyaasiga ahaa ee xisbiga KULMIYE ku galay olalaha,“markii uu xisbiga KULMIYE dawladnimada helay wixii aanu umadda ugu ballan qaadnay iyo barnaamijkayagii iyo isbeddelkii khayrka qabay ee aanu doonaynay, raggii jiho-habaabiyey ee ilaa maanta aamusnaanta shacabka Somaliland baday, ayaa nagu soo biiray.” Ayuu yidhi xildhibaan Siciid Cilmi Roobel.
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa hoosta ka xarriiqay in xubnaha dhawaan soo galay xisbiga WADDANI yihiin qaar ku hammiyey inay burburiyaan xisbiga KULMIYE, si ay xisbi cusub u abuurtaan, waxana uu yidhi,“Raggii aan uga tegay xisbiga KULMIYE ee dhibanaha iga dhigay, ayaa nagu soo biiray, waxana aan qabaa in cidhib la’aani ay WADDANI kusoo socoto, ragganina waxa ay doonayeen inay KULMIYE ka takhalusaan oo xisbiyo cusub samaystaan.”
Mar uu sifooyinka ragga uu hoggaaminayo Ex. Wasiir Xirsi ee xisbiga WADDANI ku biiray bulshada u sifaynayo, waxa uu yidhi,“imika xisbiga baqdinta leh ee abrisku soo galay waa WADDANI, KULMIYE baqdin maleh oo isagu wuu soo dhamaysay.”
Xildhibaan Siciid waxa uu si cad u sheegay inuu ku biirayo garabka uu hoggaamiyo Axmed Muumin Seed oo caddaalad-darro ka tirsanaya hoggaanka xisbiga WADDANI,“waan teegeersanahay garabkaas, waayo dadkaasi waa dadkii aanu wada shaqaynaynay, weliba Hinda iyo waa garabkaygii kulmiye ee raggan aan kuu sheegayaa ay dibadda u tuureen weeye, cabashada ay qabaanna waan la qabaa aniga labftaydu waan ku biirayaa garabkaas, xisbigii WADDANI-na Xirsi baa nagaga qiimo batay.” ayuu yidhi Siciid Cilmi Rooble.
Yemen: Indians bombed in boats between Yemen and Somalia
Somaliland: Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Oo Si Adag U Dhaliilay Siyaasada Arrimaha Dibada Somaliland & Arrimo Kale